E nwere oge na ị na-awụlikwa elu ụgbọ mmiri si iOS ka Android, chọpụta na gị niile dị mkpa kalenda, dị ka oge atọrọ, nzute, ihe, ka nọ iCloud. Chọrọ ka ịgbakwunye iCloud kalinda na Android ekwentị ma ọ bụ ma chọta ụzọ na-adịghị? Echegbula. Ọ bụ otu nke achicha. Taa, isiokwu a na-egosi gị 2 mfe ụzọ ime nyefe ma ọ bụ mmekọrịta iCloud kalenda Android. Na-agụ na.
Method 1. Tinye iCloud Kalinda ka Android site iCloud na Google Kalinda
Method 2. Share iCloud Kalinda na Android na MobileTrans na 1 Pịa
Nke a bụ free ụzọ na-etinye iCloud kalinda na Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba dị ka ogologo oge dị ka i nwere Google akaụntụ. Site na iji nke a ụzọ, ọ ga-mbupụ gị iCloud kalenda ihe .ica faịlụ, na mgbe ị nwere ike bulite ka Google kalenda. N'ikpeazụ mmekọrịta Google akaụntụ na gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba.
Export iCloud kalenda dị ka Ica. faịlụ> bulite ka Google kalenda> mmekọrịta Google na Android
Na Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba
Nzọụkwụ na-nzọụkwụ ndu na-esi mbupụ iCloud kalenda Android
Nzọụkwụ 1. Launch iCloud website na ihe ịrịba ama na akaụntụ gị.
Kwụpụ 2. Pịa Kalinda ịbanye kalenda akara panel.
Nzọụkwụ 3. Họrọ a kalenda Atiya, dị ka Kalinda, ọ bụ ọrụ. Pịa òkè akara ngosi.
Nzọụkwụ 4. Na mmapụta dialog, nne Mmetụta Public kalenda. Mgbe ahụ, a url uche egosi na n'elu, nke na-amalite na webcal.
Nzọụkwụ 5. Detuo URL na mado ya n'ime adreesị ubi na nchọgharị gị. Biko adịghị pịa Tinye ma ọ bụ Return. Nzọụkwụ 6. ịgbanwe "webcal" na "http", na pịa Tinye ma ọ bụ Return.
Nzọụkwụ 7. A Ica. faịlụ nke na-azọpụta gị iCloud kalenda ga-akpaghị aka ebudatara gị na kọmputa.
Kwụpụ 8. Open Google nchọgharị na banye na gị Google akaụntụ. Mgbe ahụ, ẹkedori Google kalenda website.
Kwụpụ 9. Na ekpe kọlụm, pịa nwesịrị triangle ziri ezi na Ndị ọzọ kalenda taabụ.
Nzọụkwụ 10. ndọpụta menu, họrọ Import kalenda. Agagharị na kọmputa gị na mbubata .ica faịlụ gị Google kalenda.
Ugbu a, ị ọma bulite iCloud kalenda Google. Ọzọ, ị dị nnọọ mkpa ka mmekọrịta Google akaụntụ na gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba.
Nzọụkwụ 11. On gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba, na-aga Ntọala> Accounts & mmekọrịta.
Nzọụkwụ 12. All akụkọ ị banyere n'ime ha na-e. Ọ bụrụ na Google akaụntụ bụ n'ebe ahụ, dị nnọọ enweta Google akaụntụ.
Kwụpụ 13. Ọ bụrụ na ọ bụghị, enweta Tinye akaụntụ. Chọta Google akaụntụ na banye n'ime ya.
Kwụpụ 14. Ekem, ke Google akaụntụ mmekọrịta na ihuenyo, nne Mmetụta mmekọrịta Kalinda> mmekọrịta ugbu a. Mgbe Ọ na-okokụre, ị nwere ike ele iCloud kalinda na Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba.
Ọ bụ ezie na usoro 1 na-agwa gị nyefee kalenda si iCloud ka Android, ọ bụ ya mere ihikosi. Ị nwere ọgụ na mgba ruo ogologo ụzọ n'ihu emecha ya. Gịnị ma ọ bụrụ na unu enweghị Google akaụntụ? Ị nwere ike otu mbụ. N'ihi ya, ka mmekọrịta iCloud kalenda Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba mfe, ị nwere ike ise nkwado si a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ. Wondershare MobileTrans Bụ ọkachamara iCloud ka Android kalenda transfer ngwá ọrụ, nke na-enye gị ike nyefee kalenda si iCloud ka Android na otu click .
Otu iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka (iOS 9/8/5/6/7 akwado)
Na Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba (Android 2.1 na mgbe e mesịrị na-akwado)
Banye iCloud akaụntụ iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka
Olee otú mbupụ iCloud kalenda akporo ekwentị ma ọ bụ Tablet
Nzọụkwụ 1. Run MobileTrans
Iji malite, download na wụnye Wondershare MobileTrans on PC. Na-agba ọsọ ya na pịa na ekwentị ekwentị Nyefee mode.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị android ngwaọrụ na iDevice ka PC
Iji USB Gịnị jikọọ gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka ka PC nakwa dị ka Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba. Mgbe ahụrụ, ma ngwaọrụ ga-egosi n'elu ke window.
Nzọụkwụ 3. Nyefee kalenda si iCloud ka Android
Site ndabara, niile ọdịnaya i nwere ike nyefee na-ticked. Iji nyefee kalenda nanị, i kwesịrị uncheck ndị ọzọ na ọdịnaya. Mgbe ahụ, pịa Malite Copy. Nyefe usoro amalite. Na usoro, ijide n'aka bụghị ịkwụpụ gị ma ngwaọrụ.
Nyefee na Ndi ana-akpo si HTC ka Samsung
Nyefee Data si gam akporo ka Android
Nyefee Ozi New akporo ekwentị
> Resource> iCloud> Olee ka mmekọrịta iCloud Kalinda na android ekwentị na Tablet